eHimalayatimes | अर्थ / कर्पोरेट | दशैंमा महँगीको मार
23rd July | 2018 | Monday | 11:30:29 PM
दशैंमा महँगीको मार
अमर शर्मा POSTED ON : Tuesday, 26 September, 2017 (12:29:21 PM)
आयो दशैं ढोल बजाई, गयो दशैं ऋण बोकाई । यो कथन आजदेखिको होइन । सम्भवतः सयांै वर्षदेखि यो कथन कहिँदै आइएको छ । हरेक वर्ष दशैं आउँछ । हरेक वर्ष दशैं जान्छ । अनि दशैं सकिएपछि आम नागरिक जहिले पनि रित्तोको रित्तो नै । यो कथनसित पुरापुर गाँसिएका छन् नेपाली जनता । तर ंवर्ष दिनको चाड भन्दै ऋण लिएरै भए पनि चाडबाड खल्लो नहोस् भन्ने मानसिकताका साथ आम नागरिकहरू रमाइरहेका हुन्छन् । तर जहिले पनि राज्य यसका लागि उदासीन भएको देखिन्छ । यो उदासिनता किन छ सरकारमा, यो बुझ्न सकेका छैनन् कसैले पनि । यदि राज्यले अलिकति तदारुकताका साथ आम नागरिकको हितमा सोचिदिने हो भने त्यसले सबैलाई सजिलो बनाउने निश्चित छ । नेपालीलाई चाडबाडका बेलामा सबैभन्दा बढी पेल्ने भनेको महँगी नै हो । दशैंको बेलामै खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिदै आएको छ ।
यो महँगीलाई रोक्नका लागि सरकारले जहिले पनि अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गराउँदै आएको छ । तथापि त्यसको उपलब्धि सुन्य नै हुँदै आएको छ । यसपटक पनि महँगीले सबैलाई नराम्ररी पेलेको छ । यसैकारण पनि हुनसक्छ यसपाली बजार दशैंमा त्यति तातेको छैन भनिँदै आइएको छ । यदि बस्तुभाउको मूल्यले आम व्यक्तिलाई नतर्साउने हो भने त्यसले बजारलाई सहज तुल्याउने निश्चित छ । बजार चल्ने भनेको नै वस्तुको मूल्यका आधारमा हो । नेपालीहरू सबै धनी छैनन् । मध्यमवर्गीय परिवार नेपालमा धेरै छन् । मध्यमवर्गीय परिवारलाई त यति गाह्रो भइरहेको छ भने न्यून आय भएकाहरूको हालत के होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । सानाभन्दा साना सामानहरूको मूल्य पनि महँगो भएका कारण बजार त्यति तात्न नसकेको हो । झन् ब्राण्डेड पसलहरूले त कति मूल्य उपभोक्तालाई तिराउँदै आएका रहेछन् भन्ने कुरा त केही दिनअघिको घटनाले स्पष्ट पारिदिएको नै छ । तसर्थ राज्यले बजार अनुगमन गरेर मात्रै हुँदैन, बजारलाई साधारण उपभोक्ताहरूका लागि सहज बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि मात्रै उपभोक्ताको ओइरो बजारतिर लाग्न सक्छ । तर राज्यले खोइ केही गर्न सकेको देखिँदैन । शहरी क्षेत्रमा यो अप्ठेरो छ भने गाउँतिर झन् के होला ? सुदूर पश्चिमको दारुण कथा भर्खरै मात्रै छापिएको छ दैनिक छापामा । खाद्य संस्थानमा चामलको अभावले गर्दा बाजुरा जानुपर्दा एक व्यक्तिले ज्यानै गुमाउनुपरेको खबर यति दुःखदायी खबर हो, बयान गर्न सकिन्न । हामी कस्तो अवस्थामा छौं त ? यसले नै देखाएको छ । तसर्थ राज्यले सिंगो नेपालका नेपालीहरूका लागि हेर्नु आवश्यक भएको छ ।